ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ ပိုင်း) ဂုံရှမ်း လူမျိုးများ၏ သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်။ | ရွှေမင်းသား
Home » ခရီးသွား လမ်းညွှန် » ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ ပိုင်း) ဂုံရှမ်း လူမျိုးများ၏ သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်။
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Wednesday, July 16, 2008
ဂုံရှမ်းလူမျိုးများသည် တိုင်းခင် လူမျိုးများ ဟုခေါ်သည်။ ဗုဒ္ဒ မပွင့်မှီ BC ၂၁၆ ခန့်တွင်
ရှမ်းလူမျိုးများသည် တရုပ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှ အလယ်ပိုင်းသို့ လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်း ခွဲ၍
ဆင်းသက်လာကြရာ ဂုံရှမ်းလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်း သံလွင်မြစ် နှင့် မဲခေါင်မြစ်
အနောက်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ကျိုင်းတုံ
ဒေသ နမ့်ခင်ချောင်းဘေးတွင် နေထိုင်ကြသော ရှမ်းများဖြစ်သည်နှင့်အညီ နမ့်ခင်ချောင်းကို
အစွဲပြု၍ တိုင်းခင် (ခ) ဂုံရှမ်း ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်..။ ဂုံရှမ်းလူမျိုးများသည် ရှမ်းကိုးပြည်ဝင်
ကျိုင်းတုံမြို့ တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ကျိုင်းတုံမြို့ ကို ရှေးယခင်က စန္ဒာရကွမ်း ၊ ခေမရဋ် ၊
တုံဂပူရိ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသလို ခေမာဝရ တိုင်းဂုံပြည် ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ကောဇာသကရာဇ် ၆၀၅ AD -1243 မှစ၍ ကောဇာသကရာဇ် ၁၃၂၄ ခုနှစ် AD – 1962 အထိ
အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စော်ဘွားဦးရေမှာ စုစုပေါင်း (၄၉)ပါးရှိသည်။ ဂုံရှမ်း စာပေ ယဉ်ကျေး မှာ ရှေး
ယခင် ကပင် ရှိခဲ့သည်။ ဂုံရှမ်း စာပေများသည် အိန္ဒိယ ပြည်သုံး Brahmi နှင့် Sunskit အက္ခရာ
တို့ မှ တဆင့် ပလ္လ၀ အက္ခရာ အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ခမင် (ခ) ခမာ လူမျိုးများမှ တဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ
လာအို ၊ဇင်းမယ် ၊ကျိုင်းတုံတို့ မှတဆင့် ဆစ်ဆောင်ပန်နား အထိ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ရှမ်းပြည်
နယ်မြောက်ပိုင်း ၀ နယ် ဟိုပန် ၊ ကွန်လုံ ၊ သိန္ဒီ နှင့် နမ့်ဆန် တို့တွင် လည်း ထိုစာပေ သုံးဆွဲမှု
ကိုတွေ့ရသည်။ ဂုံရှမ်းတို့ ၏ ရိုးရာ ထုံးစံ ထူးခြားချက်မှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဖြစ်သည်။
သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်မှာ ဖရား ကျောက်မထု ကျိုင်းတုံမြို့  ကိုအုပ်ချုပ်စဉ် သက္ကရာဇ် ၇၇၂ ခုနှစ်
တွင် ဟွေပွန် ဟူသောနေရာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရာမှ မမျှော်လင့်ဘဲ တစ်နယ်လုံး မိုးခေါင် ရေရှား ဖြစ်သဖြင့်
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသည့်ကပ်ဆိုးကြီးနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ထိုအခါ ဖရားကျောက်မထု က ပုဏ္ဏားများ အား
တွက်ချက်စေသောအခါ ဥတ္တမ အမည် ရှိ ပုဏ္ဏားက ကျိုင်းတုံမြို့ ၏ နေ့နံသည် တနင်္လာနံ ဖြစ်သောကြောင့်
ဂုံလူမျိုး အယူရှိသူ တစ်ယောက် ၏ ပါးစပ်တွင် တနင်္လာနံ လခြမ်းကို ငုံစေလျက် သင်္ကြန် အကျနေ့တွင
် သဲပုံစေတီနှင့်တကွ ဖားရုပ်ကို ပူဇော်ပသပေးခဲ့ပါသည်။ထိုနေ့မှပင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့်
တောင်သူလယ်သမားများထွန်ရက်စိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ကြန်ကာလ ရောက်တိုင်း နှစ်စဉ်
ကျင်းပလာခဲ့ရာ၁၂၆၀ ပြည့်နှစ် တွင် ကျိုင်းတုံ မြို့  ကို အုပ်ချုပ်သော စော်ဘွားကြီး စ၀်ကွန်ကျောက် အင်တလိုင်း က
ကျိုင်းစံရပ်ကွက်ရှိ ဖယားဇာ အမျိုးအနွယ်ကို ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
သင်္ကြန်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မင်္ဂလာစည်တော် ကို ထုတ်ပြီး ကျိုင်းစံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရင်ပြင်တော်မှ
မိုင်းယန်းမြို့ နယ် ဟာယန်ကင်း တောင်ပေါ်နေ တိုင်းလွယ်လူမျိုးအဖွဲ့  က မင်္ဂလာစည်တော်ကို ထုတ်တီးကာ
အခမ်းအနားဖြင့်ချီတက်ကာ ညလုံးပေါက် တီးပေးသည်။ သင်္ကြန်အကျနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မင်္ဂလာစည်တော်ကြီး ၊
သင်္ကြန်မင်း ရုပ်ထုနှင့် အလံဖြူ ၊အလံနီ ကိုင်ဆောင်သည့် အဖွဲ့  ကို မျိုးနွယ်ဝင် တစ်ဦး က မြင်းစီးပြီး
မိုင်းယန်းလမ်း အတိုင်း နမ့်ခင်ချောင်း သို့ ထွက်ခွာပါသည်။ ထိုအခါ ပြည်သူလူထုက တပျော်တပါး လိုက်ပါပို့ဆောင်
ပြီး လမ်းခရီးတွင် လည်း ရေပက်ကစားသူများနှင့် စည်ကားလှပါသည်။နမ့်ခင်ချောင်း လောင့်ကုတ် သို့ရောက်သော
အခါ မင်္ဂလာသုတ် ရွတ်ဆိုပြီး ရွံ့  ဖြင့် ပြုလုပ်သော ဖားရုပ်သင်္ကြန်မင်း ရုပ်ထုတို့ကို ချောင်းထဲသို့ မျှောချလိုက်ပါ
သည်။မင်္ဂလာစည်တော်တီး အဖွဲ့ သည် လာလမ်းအတိုင်း မြို့ ထဲသို့ ၀င်ကာ မြို့ လယ်ရှိ ဗောဓိပင်ကြီး၌ ခေတ္တ ရပ်
နားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆွမ်တောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ရဟန်းတော် ၄ ပါး က အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော
ပရိတ်ရေများဖြင့် ပက်ဖျန်းပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ သို့ဖြင့် ကျိုင်းတုံမြို့  သင်္ကြန်ပွဲ ကို ယနေ့ အထိ
Unique tradition of the Gon Shans is the New Year Festival. In Myanmar Era 772 when Phra Kyio Matu was sawbwa of Kengtung there wasabig drought and people were in heavy misery with consequent unstable situations. The Sawbwa asked the learned astrologers on ways to escape from this distaster and he was told that accroding their calculations, Kengtung belonged in the Monday planet but the rulers, being Yun people, were from the Rahu (or) the second part of Wendnesday planet, So there were internal conflicts within the planets inself. So to erase these conflicts the astrologers suggested that 24 Tai Loi people from Moung Yang area should be summoned be Kengtung. After they are dressed in red and white robes they are then to beat auspicious drum, hung inside the compound of the Sao Lon Kart (nat shrine) from the 1.00 p.m on the Seecond day of the eve of the New Year.
On the Second day of the eve of the New Year the drum is taken from its place. Thenarepresentative of the Zar people who by traditions is allowed to wear the cloths of Sankarm (Sakra) will follow onahorse behind the drum andapapier mache images of Sankarm (Sakra) and the procession will follow the Loimwe-Mong Yang Road towords Long Kop on the Nam Hkun creek. The people lining the procession route will sprinkle scented water on the procession for good luck.
A clay statue ofafrog, representing the Rahu planet, withacresent moon, representing the Monday planet, is constructed on the bank of the creek and when the procession reach the place elder persons will recite the Mingala sutra and everybody kowtows. Then both the staute of the frog and Sankarm (Sakra) are sent down the creek. The Tai Loi people bring back the drum to the original routed and when the drum reaches the Maha Muni Pagoda,4monks from Wat Son Hkam monastery, which is situated under the banyan tree supposed to house the guardian spirit of Kengtung, will recite the Mingala sutra and rehang it back at wat kengzan Monastery. As the ceremony ended the heavens opened up withadeluge and everybody was happy. This tradition started in Myanmar Era 772 and carried on up till now annually.